प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पुर्वनै बाहिरियो सम्भावित यस्तो नतिजा ! - Damak No.1 Online Patrika
प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पुर्वनै बाहिरियो सम्भावित यस्तो नतिजा !
महोत्तरी | प्रदेश नम्बर २ को असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसले पहिलो हुने दावी गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ लाई नै आफ्नो राजनीतिक बेस बनाउँदै आएका राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमले पनि प्रदेश २ को स्थानीय तह चुनावमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति रहने जनाएका छन् । दुई चरणका निर्वाचनमा धेरै पछाडि तेस्रो स्थान पाएको माओवादीले पनि प्रदेश २ मा आफू पहिलो हुने भन्न छोडेको छैन ।
यसपटक चक्रपथ डटकमले प्रदेश २ का ८ जिल्लामा खटाएको टोलीले राजनीतिक दलका नेता, त्यहाँ जितको मुख्य दावेदार उम्मेदवार र स्वतन्त्र विश्लेषकहरुसँग परामर्श गरी रिपोर्ट बनाएको छ । मुख्य दल एमालेका नेताहरुको दावी अनुसार त उनीहरुले कूल १३६ स्थानीय तहमा ७० देखि १०० स्थानीय तहसम्म जित्ने दावी गर्दै आएका छन् । तर, निर्वाचन हुने स्थानमा मतदतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कका आधारमा तयार गरिएको विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सप्तरीका १८ मा कसको कस्तो ?
सप्तरीमा ९ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये एमालेले ५, कांग्रेसले ५, माओवादीले २, लोकतान्त्रिक फोरमले २, राजपा २ र संघीय समाजवादी फोरमले २ स्थानीय तह जित्ने अपेक्षा गरेका छन् । तराई मधेसमा भएको विगतको आन्दोलनमा एमाले विरुद्ध सबै शक्ति एकै ठाउँ भए पनि अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदा कांग्रेस, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका आ–आफ्नै पोल छन् ।
सप्तरीमा सत्तारुढ कांग्रेसले कृष्णश्रवण, वलानबिहु र तिलाठी गाउँपालिकामा आफूले जित्ने दावी गरेको छ । यस्तै सुरुङ्गा नगरपालिका र खड्गपुर नगरपालिका आफूले जित्ने कांग्रेसको आकलन छ । तर, सुरुङ्गामा एमालेसँग कडा टक्कर हुँदा एमालेले लैजान सक्ने उसको आन्तरिक विश्लेषण छ ।
यस्तै सप्तरीमा एमालेले डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तकोसी नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, बेली चमेना गाउँपालिका र कञ्चनरुप गाउँपालिकामा सजिलैसँग जित्न सकिने आकलन गरेको छ । एमालेले राम्रो परिचालन गर्न सके अन्य केही स्थानीय तह थप्न सकिने आन्तरिक विश्लेषण गरेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले सप्तरीको बोदेउ र तिरहुत गाउँपालिकामा आफूले जित्ने दावी गरेको छ । यस्तै माओवादीले छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा आफूले जित्न सक्ने आशा गरेको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा एमाले, कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा सबैले जित्ने दावी गरेका छन् । तर, प्रतिस्पर्धा भने एमाले र कांग्रेसबीच हुने देखिएको छ ।
यस्तै राजपाले हनुमाननगर र कंकाली नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकामा आफूले जित्न सक्ने आकलन गरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकले भने कञ्चनरुप गाउँपालिका आफूले जित्ने दावी गरेको छ । कञ्चनरुपमा एमालेसँग कडा टक्कर हुने लोकतान्त्रिक फोरमको मुल्यांकन छ ।
महोत्तरी १५ मा चारपक्षीय प्रतिस्पर्धा
महोत्तरीमा १० नगरपालिका र ५ गाउँपालिका छन् । जसमध्ये कांग्रेसले ७ वटामा जित्ने दावी गरेको छ । कांग्रेसको वरावरै दावी एमालेको पनि छ । तर, भित्री आकडामा भने यी दुवै दलले आफ्नो दावी पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । एमाले बाहिर ७ वटा स्थानीय तह जित्ने दावी गरे पनि ६ वटा स्थानीय तहमा जित्नेमा ढुक्क देखिएको छ । कांग्रेस पनि ७ स्थानीय तह जित्ने दावी गरे पनि राजपा समाजवादी फोरमको समेत उम्मेदवारीका कारण आफूले दावी गरेजस्तो नतिजा आउनेमा आशंकित छ । महोत्तरीमा माओवादीले २, समाजवादी फोरमले १ र राजपाले १ सिट जित्ने आकलन गरेका छन् । त्यहाँ सबैसजो स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धी दल एमाले देखिएको छ । जलेश्वर नगरपालिकामा आफूले जित्ने राजपाले दावी गरेको छ ।
धनुषाका १८ मा कांग्रेस पहिलो हुन सक्ने
१८ स्थानीय तह रहेको धनुषामा जनकपुर उपमहानगरपालिका सहित अन्य ८ नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका छन् । प्रदेश २ का ८ जिल्ला मध्ये कांग्रेसले सबैभन्दा बढी जित्ने आशा गरेको जिल्ला धनुषा नै हो । धनुषाका १८ मध्ये ६ वटामा जित्ने कांग्रेसको दावी छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेसँग कडा टक्कर हुने कांग्रेसको अनुमान छ । एमालेले पनि १८स्थानीय तहको एकतिहाई आफूले जित्ने आकलन गरेको छ । धनुषामा राजपाले केही स्थानीय तहमा कांग्रेस र केहीमा एमालेसँग टक्कर लिई २ स्थानीय तह जित्ने आशा राखेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमको अन्य भन्दा कम प्रभाव रहेकाले ती स्थानीय तहमा कांग्रेस एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा आउन सकिने राजपाको दावी छ ।
सिराहामा १७ मा एमाले बलियो
सिराहामा ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १७ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये बहुमत स्थानीय तह जितेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने एमालेले लक्ष्य बनाएको छ । सिराहाको सवैभन्दा ठूलो नगरपालिका लाहानमा आफूले जित्नेमा एमाले ढुक्क देखिन्छ । एमालेका उम्मेदवार मुन्नी साह सबै उम्मेदवारको तुलनामा हेबीवेटका रहेकाले अन्य दल पनि लाहान एमालेले जित्ने कुरामा शंका गर्दैनन् । तर, उनीहरु सिराहमा जिसस गठन गर्न पुग्नेगरी एमालेको बहुमत नआउने दावी गर्छन् । एमालेले लाहान, कल्याणपुर, गोलवजार र मिर्चैया नगरपालिकामा आफूले सजिलै जित्ने अकडा बनाएको छ । यस्तै भगवानपुर गाउँपालिका पनि आफूले जित्ने सुरक्षित ठाउँ भएको एमालेको विश्लेषण छ ।
सिराहाका सिराहा नगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमले जित हात पार्ने दावी गरेको छ । तर, यसमा एमाले र कांग्रेस कडा प्रतिस्पर्धामा आउने उसको विश्लेषण छ । सिराहाका १७ मध्ये ५ स्थानीय तहमा जित्ने कांग्रेसको दावी छ । राजपाले २ स्थानीइ तह जित्ने दावी गर्दै आएको छ ।
सर्लाहीमा एमालेको बहुमत पुग्न सक्ने
प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा पछिल्लो पटक एमालेले निकै पकड जमाएको निर्वाचनका क्रममा देखिएको छ । राजपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा महामन्त्री जंगीलाल रायको एमाले प्रवेशबाट पनि एमाले बढी उत्साही देखिन्छ । जनस्तरमा लोकप्रिय रहेका रायले राजपाबाट एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना कार्यकर्तालाई एमालेबाट ४ वटा गाउँपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार नै बनाएका छन् । राजपा सर्लाहीका पूर्व अध्यक्ष नै एमाले प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसका केही मतदाता पनि उनीहरुसँगै एमालेतिर तानिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
लालबन्दी र हरिवन जस्ता ठूलो जनसंख्या भएका महानगरपालिकामा सजिलैसँग जित्ने एमालेको हिसाव छ । पहाडी समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता पनि एमालेलाई सघाउने पक्षमा देखिएका छन् । सर्लाहीका २० स्थानीय तह मध्ये ११ वटामा जित्न सकिने एमालेको आन्तरिक विश्लेषण छ । लालबन्दी, हरिवन, ईश्वरपुर, बागमति, बरहथवा, कबिलासी, मलंगवा, आदि घना वस्तीका क्षेत्रमा सजिलै जित्न सकिने एमालेको विश्लेषण छ । सर्लाहीमा कांग्रेसले ८ स्थानीय तह जित्ने दावी गरेको छ । कांग्रेसले बलरा र गोडयैता जस्ता ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुमा जित्न सकिने वताएको छ । राजपाले वसन्तपुर लगायतका अन्य १ स्थानीय तहमा जित्ने दावी गरेको छ । माओवादीले भने मधेसकेन्द्रित दलसँग आन्तरिक सन्तुलन मिलाएर ३ स्थानीय तह जित्ने दावी गरेको छ । यद्यपि स्थानीय तहमा मधेसकेन्द्रित दलका आ–आफ्नै उम्मेदवार छन् ।
२ उपमहानगर सहित बाराका १७ मा के होला ?
२ वटा उपमहानगरपालिका सहित १७ स्थानीय तह रहेको बारामा सिमरा र कलैला उपमहानगरपालिका एमालेले सजिलै जित्न सकिने निश्कर्ष निकालेको छ । १७ स्थानीय तह मध्ये निजगढ, कोहल्वी लगायत ९ वटामा जित्ने एमालेको आन्तरिक मुल्यांकन छ । बाराको सिम्रौनगढमा राजपाले जित्ने आकलन गरेको छ । यद्यपि त्यहाँ एमालेसँग कडा टक्कर हुने उसको मुल्यांकन छ । महागढीमाई र पचरौतामा कांग्रेसले जित्ने आशा गरेको छ । बाराका सबैजसो स्थानीय तहमा एमाले र कांग्रेसका बीच टक्कर हुने आकलन गरिएको छ ।
पर्साका १४ मा एमाले कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धा
१४ स्थानीय तह रहेको पर्सामा कांग्रेसले ८, एमालेले ८ माओवादीले ३, फोरमले ६ र राजपाले ५ स्थानीय तह जित्ने दावी गरेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकले पनि ३ वटा स्थानीय तहमा जित्ने दावी गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र सर्भेक्षकहरुले भने पर्सामा एमाले र कांग्रेस मध्ये एक पहिलो हुने वताएका छन् ।
बीरगञ्ज महानगरपालिकामा कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेदवारबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने सर्भेक्षकहरु वताउँछन् । मेयरमा फोरमका उम्मेदवारले राजपाका उम्मेदवारले भन्दा बढी मत ल्याउने उनीहरुको विश्लेषण छ । कांग्रेसका अजय द्विवेदी र एमालेका बसरुद्धिन अन्सारीबीच कडा टक्कर हुने उनीहरु वताउँछन् ।
यस्तै पर्सागढी नगरपालिकामा एमाले र कांग्रेस तथा बहुदरमाई नगरपालिकामा कांग्रेस, एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने उनीहरुले वताएका छन् । यस्तै पोखरिया नगरपालिकामा कांग्रेस, एमाले र लोकतान्त्रिक फोरम, कालिकामाई गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेस, पटेरवा सुगौली गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेस, ठोरी गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेस, जिराभवानी गाउँपालिकामा कांग्रेस एमाले र माओवादी, छिपहारामाई गाउँपालिकामा माओवादी, एमाले र कांग्रेस, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा कांग्रेस, एमाले र राजपा, धोविनी गाउँपालिकामा कांग्रेस, राजपा र एमाले पहाह मैनापुर गाउँपालिकामा कांग्रेस, राजपा र एमाले विन्धवासिनीमा कांग्रेस, एमाले र फोरम तथा सखुवा गाउँपालिकामा एमाले, फोरम र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने उनीहरुले वताए ।
रौतहटका १८ मा चारपक्षीय प्रतिस्पर्धा
१८ स्थानीय तह रहेको रौतहटमा दलहरुको दावी अनुसार सिट आउने हो भने ३० भन्दा बढी पुग्छ । रौतहटमा एमालेले १०, कांग्रेसले ८ र राजपाले १२ सिट जित्ने दावी गरेका छन् । तर, त्यहाँ चारपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका गौरमा एमाले र राजपाबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । एमालेका शम्भु साह र राजपाका अजय गुप्ता गौरमा मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । रौतहटमा १६ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिका छन् । एमालेको पकड रहेको मानिने चन्द्रपुरमा उम्मेदवारी विवादका कारण माओवादी हौसिएको छ । तर, चन्द्रपुरमा एमालेपछि कांग्रेस रहेको स्वतन्त्र विश्लेषकहरु वताउँछन् । चारपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा रौतहटमा चारै पक्षको बरावरी नतिजा आउन सक्ने उनीहरु वताउँछन् ।
चक्रपथ डटकमबाट साभार